बार्सिलोना र रियलबीच महाभिडन्त ! कसले मार्ला बाजी ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»खेलकुद»बार्सिलोना र रियलबीच महाभिडन्त ! कसले मार्ला बाजी ?
बार्सिलोना र रियलबीच महाभिडन्त ! कसले मार्ला बाजी ?
By दिपेश बिष्ट on २३ बैशाख २०७५, आईतवार ०६:१६ खेलकुद
बैशाख २३, चालू सिजनमा ला लिगाको दोस्रो एल क्लासिको आज राति हुँदैछ । क्याम्प नाउमा राति १२ः३० मा हुने खेलमा बार्सिलोना र रियल मड्रिड ला लिगामा ३५ औं पटक आमने सामने हुँदैछ । बार्सिलोनाले यो सिजनमा ला लिगाको उपाधि सुरक्षित गरिसकेको छ । यो सिजनको पहिलो एल क्लासिकोमा बार्सिलोनाले रियललाई उसकै मैदानमा हराएको थियो । डिसेम्बर २३ मा भएको खेलमा बार्सिलोना ३–० ले विजयी भएको थियो ।
यो सिजनमा रियल ला लिगामा जम्न सकेन । लिगका ३४ खेल खेल्दा २० खेलमा जित ८ खेलमा बराबरी तथा ५ खेलमा हार व्यहोरेर हालसम्म ७१ अंक मात्रै जोडेको छ ।
कोपा डेल रे लेगानेससँग पराजय व्यहोरेको तथा ला लिगमा पनि बार्सिलोनाको पोल्टामा गएको अवस्थामा रियलको लागि जारी सिजनमा च्याम्पियन्स लिग मात्रै बाँकी छ ।
घरेलु मैदानमा भएको पहिलो एल क्लासिकोमा व्यहोरेको हारको बदला लिने योजनामा रियल मैदान उत्रनेछ । यता बार्सिलोना भने आफ्नै मैदानमा पुनः रियललाई स्तब्ध बनाउने योजनामा छ । दुवै टोलीका लागि एल क्लासिको प्रतिष्ठाको लडाई हुनेछ । त्यस्तै इनेस्टाको यो अन्तिम एल क्लासिको हुनेछ।